Faah-Faahin: Socdaalka Madaxweynaha Jubbaland ee gobolka Gedo – Radio Daljir
Faah-Faahin: Socdaalka Madaxweynaha Jubbaland ee gobolka Gedo
Agoosto 6, 2015 2:45 b 0
Khamiis, Ogoosto 06, 2015 (Daljir) — Sidaan la wada soconno, shalay waxaa degmaad Doolow ee gobolka Gedo gaaray madaxweynaha Jubbaland, mudane Amed Maxamed Islaam (axmed madoobe) iyo wafdi uu hogaaminayay. Waxaana halkaas si diiran ugu soo dhaweeyay shacabka gobolka Gedo oo aan kala harin. Soo dhaweyta wafdiga madaxweynaha waxaa ka qeybqaatay dhammaan maamullada degmooyinka gobolka Gedo, sida Luuq, Ceelwaaq, Baladxaawo, halka Degmada Garbahaareyna ay goobjoog ahaayeen siyaasiyiin matalayay.
Sidoo kale, degmada Baardheere waxaa ka soo duulay wafdigii ugu ballaarnaa, oo uu hogaaminayay madaxweyne kuxigeenka koowaad ee Jubbaland, mudane Cabdullaahi Sheekh ismaaciil (fartaag). Wafdiga Fartaag waxaa ka mid ahaa: Maxamed Cabdi Kaliil, Col. Cabbaas Ibraahim Gurey, Maxamuud Sayid Aadan iyo siyaasiyiin kale.
Waxaa kaloo la sheegayaa siyaasiyiin ka timid dhanka Muqdisho, oo laga magacdhabay siyaasi Cabdi Barre Shire. Hadaan si kale u qeexno, wafdiga Madaxweyne Axmed waxaa gobolka Gedo ku soo dhaweeyay guud ahaan shacabka iyo siyaasiyiinta gobolka Gedo, mucaarid iyo muxaafid intaba.
Sida uu sheegay madaxweyne ku xigeen fartaag oo shalay la hadlay saxaafadda, socdaalka madaxweyne Axmed waxuu daarnaa dhowr arimood oo kala ah: Hambalyo ku wajahan bulshada gobolka, lana xiriirta xoreynta gobolka laga xoreeyay maleeshiyada Alshabaab, u diyaar garowga dib u xoreynta gobolka Jubada dhexe, gaar ahaan caasimadda jubbaland ee Bu’aale, oo la rabo in bulshada gobolka ay ka qaadato qeyb libaax, iyo weliba xalinta tabashooyinka qaar ka mid ah siyaasiyiinta gobolka.
Sida uu sheegay Madaxweyne ku xigeen fartaag, isla shalay waxaa bilowday kulamo salaan iyo kala warqaadasho ah, oo dhex maray wafdiga madaxweyne Axmed iyo Siyaasiyiinta mucaaradka, taasoo ka dhigan in durba fooda la is daray. Ka miro dhalinta kulamadan bilowday, iyo weliba xal u helidda tabashooyinka siyaasiyiinta gobolka qaar, waa halbeega lagu cabiri doono socdaalka madaxweyne Axmed, guul iyo guul darro.
Guusha laga gaaro kulamada Doolow waxay dan ugu jirtaa 3 Jiho.
Intaan qadiyad guud iyo meel kalaba la gaarin, ka miro dhalinta kulamada Doolow waxay guul weyn u tahay shacabka Gobolka Gedo, oo qaati ka taagan khilaafaadka hareeyay siyaasiyiinta gobolka. Aad bay shacabka gobolka u soo dhaweynayaan hadii xal loo helo siyaasiyiinta caqabadda ku ah horumarka iyo maslaxada guud ee gobolka, kuna xiran meelaha kale, sida Muqdisho. Sidoo kale qadiyadda guud ee Jubbaland, waxaana halkaas ku soo afjarmayaa carqaladeny ay wadeen siyaasiyiin mucaarad ahaa. Dhanka kale marka la xaliyo khilaaf iyo mashaakil ka taagnaa gobol ka mid ah dalka Soomaaliya, waa guul u soo hoyatay qaranka Soomaalia, iyo guud ahaan umadda Soomaaliyeed, min Raascaseyr iyo ilaa Raaskambooni.
Waxaase nasiib darro ah, in dowladda federaalka aanay ku farxi doonin wixii guul ah oo ka soo baxa kulamada Doolow. Dowladda federaalka Soomaaliya waxay dadaalo iyo weliba kharashaad badan ku bixisaa kala qooqobka bulshada Jubbaland, siiba in gobolka Gedo laga faquuqo Jubbaland inteeda kale, waxayna lug weyn ku leedahay ismaandhaafka u dhexeeya Jubbaland iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta gobolka Gedo.
Waxay tahayba, waa markii ugu horeeysay ee uu madaxweyne Axmed cagaha dhigo gobolka Gedo, tan iyo intii loo doortay xilka madaxweynaha Jubbaland, 15 may 2013. Aad bayna muhiim u ahayd in uu saanta soo mariyo gobolka, si fool ka fool ahna ula kulmo bulshada gobolka. Dhanka kale soo dhaweynti diiraneyd ee loo sameeyay wafdiga madaxweyne Axmed iyo weliba ka soo qabgalka dhammaan degmooyinka gobolka , waxay meesha ka saartay dacaayadihii laga fidiyay gobolka, ee la lahaa waa mucaarad.
Isku soo xooriyoo, Markaan ka qiyaas qaadano xogaha rasmiga ah ee laga helayo gobolka, gaar ahaan degmada Doolow iyo weliba soo dhaweynti aan loo kala harin ee loo sameeyay wafdiga madaxweynaha, oo weliba la sheegay in soo dhaweynta ay ka qeyb qaateen ina Kaliil iyo ina Sayid, guusha kulamada Doolow waa mid banaanka taala, waxayna dareen ku tahay, Alshabaab iyo VillaSoomaaliya.
Shirkii Khamiislaha ee Dowladda Puntland oo Qodobo Muhiim ah looga Hadlay